Dowladda oo wafdi hordhac ah u dirtay shirka London | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Dowladda oo wafdi hordhac ah u dirtay shirka London
Dowladda oo wafdi hordhac ah u dirtay shirka London
Ayadoo 11-ka bishan lagu wado in magaalada London uu ka furmo shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo ay ka qeyb galayaan in ka badan 40 dowladood iyo ururo caalami ah ayaa wafdigii u horeeyay dowladda Federaalka u dirtay.
Wafdigan ayaa waxaa hoggaaminaya Madaxa Qaban qaabada shirka London ee dowladda Federaalka C/raxmaan Ceynte ahna La Taliyaha Madaxweynaha.
C/raxmaan Ceynte ayaa wareysi uu siiyay Telefishinka SNTV xaruntiisa London ayuu kaga hadlay arrimaha shirka iyo qaban qaabada socota, isagoo tilmaamay in shirka fursad u yahay Soomaaliya.
Waxaa uu sheegay in qaban qaabada shirka ay soo wadeen saddexdii bilood ee u dambeeyay, isla markaana qorshaha yahay sidii dowladda Federaalka shirka London ula tagi laheyd hadaf mideysan oo la taaban karo.
Mr Ceynte ayaa xusay in in afar ajande looga hadlayo shirka, kuwaadoo ka mid ah 1- Amniga, 2- kobcinta iyo dib u soo nooleynta dhaqaalaha 3-siyaasada iy dib u eegista dastuurka 4- Qaabka wada shaqeyneyd ee Soomaaliya iyo Beesha Caalamka.
Waxaa uu xusay in qodobadaas ay ku hoos jiraan qodobo badan oo muhiim u ah in laga heshiiyo, isagoo tusaale u soo qaatay qodobka amniga oo qorshihiisu yahay dhismaha ciidan oo qaab dhismeedkiisu ay ka hor-yimideen Xildhibaanada.
Wasiirkii hore ee Qorsheynta C/raxmaan Ceynte ayaa sheegay in shirka London looga hadlayo arrinta maqaamka Muqdisho, oo ka mid ah qodobada ku hoos jira ajandaha siyaasada, isla markaana loo baahan yahay in laga heshiiyo.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo, Ra’iisul Wasaaraha Britain Theresa May iyo Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey ayaa si wada jir ah u shir guddoomin doona shirka ka furmaya London 11-ka bishan
Previous articleMadaxwayne Farmaajo oo maanta gaaray Afgooye
Next articleMadaxwaynaha Soomaaliya oo u ambabaxay London